Kingbo KB-SM02 Ejiji Design Breathable agba agba akpụkpọ ụkwụ nwoke Knitting Sport Man Akpụkpọ ụkwụ, China kingbo KB-SM02
AKW SHKWỌ MAKA
Ị nọ ebe a : >lọ>Product>EGO NA-EGO>MEN
INWE INWE PVC
kingbo KB-SM02 Ejiji Ejiji Na-eku Ejiji Na-agba Ọsọ Akpụkpọ ụkwụ Ndị Nwoke Knitting Sport Man Shoe
Agba: Agba ntụ
Kwụ Tergwọ Okwu: L / C, D / A, D / P, T / T
MOQ: 1000 ụzọ abụọ
Nwere ike ikwu
Elu: FLYKNITTING + PU
OZI OZI: MESH
Q1, Kedu ka ngwaahịa gị si dị mma?
A1: Anyị bụ ndị ụlọ ọrụ Zhejiang, ọkachasị n'ichepụta akpụkpọ ụkwụ dị mma nke Mid na High dị elu, ma kpụga ya na Europe.
Q2, ị bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma ọ bụ ụlọ ọrụ azụmaahịa?
A2: Ha abụọ dị. Anyị etinyewo aka na mpaghara a ruo ọtụtụ afọ, yabụ enwere ike idobe ọnụ ahịa asọmpi ndị ahịa anyị. Na mma maka ngwaahịa na anyị mgbe ọrụ dị mma karịa ndị ọzọ.
Lọ ọrụ: Ningbo Kingbo International Trade Co., LTD.
Adreesị: Ime ụlọ 1806, Ugwu ụlọ, ụlọ elu, okporo ụzọ Shuimen, Cixi, Ningbo, PRChina
Email: shen@nbkingbo.com / lulu@nbkingbo.com
Ekwentị: + 86-13805818602 / 0574-23718050
anyị ụlọ ọrụ
Ningbo Kingbo International Trade Co., Ltd. e guzobere 1995, ọ na-pụrụ iche na akpụkpọ ụkwụ export.It emi odude ke ufọt Cixi, Ningbo, nso Hangzhou Bay Bridge na ọdụ ụgbọ mmiri nke Ningbo. Anyị factory emi odude ke Wenling, Taizhou, na a showroom nke ihe karịrị 600 square mita. Na echiche nke ọgaranya ahụmahụ na ọkachamara otu na akpụkpọ ụkwụ n'ichepụta na mbupụ, na elu mma na ọrụ anyị ahịa, anyị na-atụ na-ewu ogologo oge azụmahịa mmekọrịta gị na gị.
Anyị ụlọ ọrụ na-etinye aka dị iche iche iche iche nke akpụkpọ ụkwụ, anyị tumadi mbupụ egwuregwu akpụkpọ ụkwụ.Besides, anyị na-ekpuchi akpụkpọ ụkwụ, kwaaji, akpụkpọ anụ akpụkpọ ụkwụ na na, nke nwere ike izute niile ahịa 'demands.Our mmepụta mbupụ ahịa bụ ihe niile n'okwu ahụ, dị ka England, Spain, Australia, Philippines wdg Ndị ahịa anyị na-agbasakwa, akpụkpọ ụkwụ na-enweghị isi, bootzone, mrpsport na SM bụ ndị ahịa anyị, ha nwere mmekọrịta anyị na ogologo oge.
Elu àgwà gbakwasara bụ anyị ụlọ ọrụ mmepụta ụkpụrụ, n'ihi ya, anyị nwere zuru ezu na elu ule usoro ka mma mmepụta si dị ukwuu ka ihe atụ. Dị ka ihe atụ, ike ule igwe, ihe flexing ule igwe, naanị abrasion ule igwe na injection ịkpụzi omumuihe 19 injection igwe 470T max, ha niile nwere ike ikwe nkwa na anyị nwere ike ịnwale.
Asambodo ulo oru
Mbukota & nzipu
Black Sport Akpụkpọ ụkwụ Men
Egwuregwu na-agba ọsọ akpụkpọ ụkwụ Mens
Egwuregwu Egwuregwu Menmụ nwoke Nnukwu
Egwuregwu Egwuregwu Menmụ nwoke
Egwuregwu Egwuregwu Menmụ nwoke White
kingbo KB-SM01 Ejiji Design Breathable agba ọsọ akpụkpọ ụkwụ Men Mkpịsị-elu Knitting Sport Man akpụkpọ ụkwụ
Tinye igbe ozi gị, oge izizi ịlele mmepe ọhụrụ anyị.
Ime ụlọ 1806, Ulo elu nke etiti, nnukwu ụlọ obibi, ụzọ Shuimen, Cixi, Ningbo, PRChina
N'ịntanetị ogologo ụbọchị niile, na-atụ anya kọntaktị gị
email Whatsapp Ekwentị top